Ụbọchị My Pet » Nwere a anwụrụ? A bụ otú ha ka ha Mara
Nwere a anwụrụ? A bụ otú ha ka ha Mara
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 30 2020 | 2 min agụ
Anyị niile nwere ya, na butterflies gị afo mgbe ị na-ahụ ya ma ọ bụ ya si gafee ụlọ; mkpụmkpụ nke ume mgbe ị ahịhịa gara aga gị anwụrụ ma ọ bụ na-eguzo ya nso ma ọ bụ ya na mbuli; na ụba obi ọnụego mgbe gị na ogwe aka dabere megide onye ọ bụla ọzọ na-ekiri fim. Ndị a bụ ndị niile n'ókè na ị na-ada ada n'ihi na onye. N'ịghọta nke a bụ mfe, ma na-ekwe ka mmadụ mara na obi gị dị ukwuu ihe mgbagwoju anya. Ebe a na-ole na ole na-egosi ụzọ na-gị na anwụrụ na ị na-emepe emepe mmetụta karịrị enyi na ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha na-eche na otu.
The n'Eziokwu Approach
The kacha ụzọ bụ na-a miri emi ume na Nchoputa na agwa ya ma ọ bụ ya na-. Dị nnọọ ka a oge ebe i nwere ike inwe gị anwụrụ naanị na-agwa ya ma ọ bụ ya gị ezi obi na-arịọ ma ọ bụrụ na ha na-eche otu ihe ahụ. Ị ga-ebikwasị ya niile si na akara na ikekwe mwube onwe gị elu ozugbo jụrụ, ma ọ bụ quickest ụzọ ya niile anya gị obi. Nke a na usoro-ewe a nnukwu ego nke ùgwù onwe onye, Otú ọ dị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a onwe-obi ike dike, ikekwe a ọzọ aghụghọ obibia ga-akasị mma.
Dịkwuo-achụ nwoke lekọtara
A ezi ụzọ na-eche si na o na-a enyi ghọọ ihe karịrị otu enyi bụ nwayọọ nwayọọ ghọọ flirtier na ihe unu ịhụnanya. Amụmụ ọnụ ọchị a otutu, eme nza nke anya, mgbe ụfọdụ wink na ngwa ngwa, onwe anya mgbe na a na-elekọta mmadụ ọnọdụ nwere ike na-enye gị anwụrụ aghụghọ ịrịba ama na ị na-enye ha ndị ọzọ ntị karịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ege ntị na gị anwụrụ n'elu ndị ọzọ ọ na-egosi gị anwụrụ na i nwere pụrụ iche mmetụta maka ya ma ọ bụ ya.
Get More Nkịtị
Were ohere i nwere ike iru eru na-emetụ gị anwụrụ. Emela, M donít pụtara ndi nochigidere ha ohere na-eme ghara iru ha ala. Mfe na-ahụ ohere na-emetụ ha aka ma ọ bụ aka dị ka ị na-arụ ụka. -Enye gị anwụrụ a ga-amakụ mgbe si goodbye ma ọ bụ na-ekele onye ọ bụla ọzọ. Chitụ ha na a flirty ụzọ mgbe egwu egwu ha na ha na-adala na nso mgbe ha na-agwa gị otu akụkọ ma ọ bụ na nzuzo. Ụba physicial kọntaktị bụ ezigbo ụzọ iji dobe mma na ị ga-achọ ịbụ ya nso ma ọ bụ ya, ma mmekọrịta maara ihe, ma n'ụzọ anụ ahụ.
-Abụ Hiri Nne Gị Okwu ịja
Malite complimenting gị anwụrụ mgbe ha na-a ịkpụ ntutu ma ọ bụ na-eyi a mma ekike. Nke a ga-ọ bụghị nanị na-eme ka gị anwụrụ enwe obi ụtọ banyere onwe ha, ma ga-mee ka ha mara na ị na-eche na ha bụ mara mma. Eme comments ka ìyou nwere ndị dị otú a oké echiche nke humorî mgbe gị anwụrụ na-eme ka a egwuregwu ma ọ bụ ìyou bụ otú smartî ekwurịta ihe na-esere bụ ezigbo ụzọ ka gị anwụrụ maara na ị n'ezie ka ha.
Ọ dịghị tactic bụ foolproof, na o nwere ike ka na-achọ gị ewepụghị si agwa gị anwụrụ mmetụta gị ma ọ bụrụ na ha donít ga-esi na ndumodu, ma ha enweghị ike inyere gị aka ka mma echiche nke otú gị anwụrụ ele gị. Na ihe ọ bụla nke ndị a si eme, ọ dị mkpa ka na-agụ gị crushís Ibọrọ. Ọ bụrụ na ha ikwu gị na-ekwu ma ọ bụ omume site na ihere ma ọ bụ annoyed, Ohere inweta bụ ha donít na-eche na otu ihe ahụ banyere gị. Ọ bụrụ na ha zaghachi achụ ihe flirting, ọ bụ ezi ihe ịrịba ama na ha na-azọpịa na gị onwe gị kwa.
Akpa a Nta Nwanyị na 5 Easy Nzọụkwụ
Gịnị Twitter Pụrụ Ịkụziri Ị Banyere Ịhụnanya?